ओली नेतृत्वको बलियो सरकार किन लुत्रुक्क गल्दैछ ? - Saptakoshionline
ओली नेतृत्वको बलियो सरकार किन लुत्रुक्क गल्दैछ ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन ०९, २०७५ समय: ६:१५:२४
काठमाडौं । सरकार गठनभएको मितिले ७ महिना पुरा भएको छ । नयाँ सरकार गठनसंगै नेपाली जनताको आसा र भरोसा निक्कै ठूलो थियो । किनकी ९ महिनामा सरकार फेरिने रोगबाट नेपालले मुक्ति पाउँछ । बलियो सरकार गठन भएको छ यस्ले जनहितमा काम गर्छ । सरकारको नेतृत्व यस्तो ब्यक्तिले गरेका छन जस्को हुटहुटी देशको विकास गर्ने जनताका अपेक्षा पुरा गर्ने भन्ने बोली हेरेक प्रकारका कार्यक्रमका भाषणमा आउने गर्छन । हो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वभाव फरक छ । कडा बोल्छन । प्रायः अडान राख्छन् । बरु झुकाउँछन्, झुक्दैनन् । तर, उनैले नेतृत्व गरेको सरकार शक्तिशाली निजी क्षेत्रसामु एकपछि अर्को गर्दै झुक्दै गएको छ । सर्वसाधारणको हितमा सरकार कडा रूपमा देखिन्छ । निजी क्षेत्र सडकमा उत्रिन्छ । सरकार केही दिन अडिएको जस्तो गर्छ । अन्ततः फेरि लुत्रुक्क पर्छ । पछिल्ला केहि प्रतिनिधि घटनाले चित्रण गरेका यथार्थता हो यो । यस्ता घटनाका चाङ लाग्दै गएका छन् ।
छोटो समयमै झन्डै दर्जन पुगेका छन् । सिन्डिकेटधारी यातायात समिति र संघले सडकमा सर्वेसर्वा अधिकार प्रयोग गरेका थिए । कम्पनी ऐनअन्तर्गतका र स्वतन्त्र व्यवसायीका सवारी गुडाउन नपाउने उनीहरूको सिन्डिकेट थियो । उनीहरूले राज्यलाई कुनै करसम्म तिर्नु नपर्ने अचम्मको नाफामूलक व्यापार गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक रूपमा यो विषयमा गुनासो बढेपछि सिन्डिकेटको जालो तोड्न सरकार भिडेर लाग्यो । केही समय सफल पनि भए जस्तो देखिएको थियो तर अन्तिममा आएपछि हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा झै भएको छ । यातायात व्यवसायीले बडा दशैंको मुखैमा आएर नेपाली जनताको ढाड सेकिदिए सरकार मुक दर्शक मात्र बनेन हेरेको हेरै भयो ।
गत साउनदेखि समिति र संघको नवीकरण नगर्ने सरकारले निर्णय नै र्गयो । सरकारले समिति र संघका नाममा रहेका करिब दुई सय ४५ खातासमेत रोक्का र्गयो । उक्त निर्णयपछि यातायात व्यवसायीहरू देशभरि आन्दोलनमा उत्रिए । यातायात क्षेत्र ठप्प पारे । सरकारद्वारा रोक्का गरिएको खाता फुकुवा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । सरकार झुकेन । तर, जब दसैं नजिकिदैं गयो, घुँडै टेक्यो । दसैंमा सर्वसाधारणलाई घर पठाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसमक्ष आइर्पयो । यस्तो अवस्थामा मौकाको फाइदा उठाउँदै यातायात व्यवसायीले सरकारलाई गलाउने नीति लिए । तिनले सर्वसाधारणलाई बोक्न रोक्का भएको खाता फुकुवा गर्नुपर्ने र भाडा बढाउनुपर्ने सर्त तेस्र्याए । सरकारले र्हायो । सिन्डिकेटधारी व्यवसायीका रोक्का भएका खाता फुकुवा गर्न प्रक्रिया सुरु गराइदियो । भाडा पनि १० प्रतिशत बढाइदियो ।सरकारी पक्ष भने यसलाई ‘जायज माग’ भनेर चोखिने गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘कानुनी रूपमा यातायातमा रहेको सिन्डिकेट खारेज भइसकेको छ । व्यवसायीसामु सरकार झुकेर सहमति र माग सम्बोधन गरेको छैन । उनीहरूका जायज माग मात्रै पूरा गरिएको हो ।’
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने खाता रोक्का फुकुवा नभए सवारी दुर्घटना हुँदा यात्रुलाई क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च दिन नसकिने दाबी गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन, यातायात व्यवसायीसामु झुक्दै सरकारले फेरि सर्वसाधारणको हितविपरीत अर्को प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दुर्घटना हुने र अत्यधिक प्रदूषण बढाउने भन्दै करीब एक वर्षअघि सरकारले २० वर्षे सवारी साधनलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अहिले त्यो प्रतिबन्ध खोल्ने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो प्रस्ताव सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको छ । २० वर्षे सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत व्यवसायीको पक्षमा हुने भएपछि व्यवसायीले मंगलबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने नीति सार्वजनिक गरेका छन् । यसरी एकपछि अर्को मुद्दामा सरकार चुक्दै जाने हो भने कानूनी राजको खिल्लीमात्र उड्ने छैन शक्तिशाली भनिएको सरकारको हुर्मत धेरै दिन जोगीनेवाला छैन ।